Mashquul laakiin jeer xiiso leh ka X-Diyaarad kaam - waxaan hadda ku jirnaa heerarkii ugu dambeeyay ee geeddi-socodka horumarinta ee 146 Xirfadle X-Diyaarad nooca waxayna ku taamayaan inay si dhakhso leh u sii daayaan.
Wada-hawlgalayaashayada 'Thranda Design' waxay qabteen shaqo qurux badan oo dhinaca koodhinta ah sidaas darteedna waxaan ku cusbooneysiinnay waxyaabaha alaabada ku qoran bogga. Si fiican u qalantaa akhrin si aad u aragto liiska muuqaalka ballaaran oo ay weheliso sharraxaad aad u faahfaahsan. Waxaad ogaan doontaa in baakadka aasaasiga ah uu hadda ku jiri doono siddeed nooc oo ka duwan seddexdii asal ahaan la qorsheeyay!
Kuwa ka walwalsan waxa lagu darayo FMC waxay ku farxi doonaan inay ogaadaan inaan hadda haysanno lambar FMC ah oo ay soo saartay Javier Cortés (FJCC) oo loogu talagalay isdhexgalka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka dib marka la sii daayo. Sii deynta bilowga ah waxay arki doontaa 146 oo ku hubeysan hubaysan FMC oo si buuxda u shaqeynaya.
Waa kuwan shaashaddii ugu dambeysay waxaanan ku dari doonnaa sidii ugu dambeysay ee loogu talagalay bogga wax soo saarka usbuuca soo socda ama wixii la mid ah.
Category: Wararka X-Diyaarad
Mashruuca VSKYLABS Aeroprakt A22-LS ee loogu talagalay X-Diyaarad by cilmi baarista laminar ayaa gaadhay diyaar garowgii ugu dambeeyay ee nooca v1.0. Diyaaradda ayaa hadda loo diyaarinayaa duulimaadkeedii ugu horreeyay ee ay ku tagto * gacmahaaga, oo ay ku jiraan buugaagta loo baahan yahay, dukumiintiyada iyo qalabyada kale sida "Gacanta" ... waa fududahay in la isticmaalo * weheliyaha liistada hubinta 3D -In-Progress shaashadda screen ku lifaaqan this post). Sii deynta nooca v1.0 waxaa la filayaa dhammaadka Abriil 2021, haddii wax waliba u socdaan sidii loogu talagalay.
Ku dhawaaqida mashruuca: The VSKYLABS Pilot-Pilot: Mashruuca TT-3!
Waqtigu waa yimid (runti horeba wuu yimid, qiyaastii sanad kahor), Mashruuca VSKYLABS C-47 wuxuu gaarey heerkii loogu talagalay * kala qeybsanaanta *, halkaasoo mashruuc gabi ahaanba nooc cusub ah lagu sameynayo si barbar socda * bilowga * C-47 Mashruuca .
Waxyaabo badan ayaa la tixgeliyey ka hor inta aan la go'aansan nooca uu u rogi doono, ikhtiyaarraduna aad ayey u ballaadhnaayeen. Wadada xoogaa muuqata waxay ahayd in la sameeyo nooc kala duwan oo DC-3 casri ah oo ay weheliso qol casri ah iyo qaabeynta avionics. Tan iyo wixii horumar ah ee diyaarad C-47 / DC-3 waa dadaal sanado badan, mar loo heellan yahay waddo horumarineed, waxay si aad ah u xirtaa wixii kale ee horumarineed ee kala duwan ee DC-3 illaa hal sano ama laba ... sidaas darteed go'aansiga nooca uu noqon doono midka soo socda * waa arrin aad muhiim u ah.
Horaantii sanadka 2020, ayaa la go'aansaday. Nooca cusub ee VSKYLABS DC-3 wuxuu ku saleysnaan doonaa Conroy Tri-Turbo-Three DC-3 beddelaad.
Marka laga eego VSKYLABS, mashruucani waa xulasho dabiici ah. Diyaaradda qaaska ah, oo ay ku shaqeyso seddex matoor PT6-45 waxay ku dhex jirtaa xudunta tijaabada VSKYLABS, fikradaha taxanaha ah ee 'Tijaabada-Pilot'. Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo duulimaad oo aad u tiro badan, waxqabadka iyo dhinacyada hawlgalka si loogu sahmiyo Tri-Turbo-Three, waxayna "ku guuleysatay" dhammaan xulashooyinka kale ... illaa iyo hadda.
Asal yar oo dib u habeyn ku rogaya Conroy Tri-Turbo-Three (TT-3)
Waxaa naqshadeeyay oo dhisay John M. Conroy, oo ah naqshadeeye diyaaradeed oo xiise leh oo waliba sameeyay "Super-Guppy Diyaarad" oo xambaarsanayd marxaladda 3-aad ee gantaalka Saturn V, intii lagu jiray barnaamijka bannaan ee Apollo. Conroy TT-3 wuxuu ahaa DC-3, oo ay ku shaqeynayaan seddex matoor PT6A turboprop, oo mashiinka # 3 uu saaran yahay sanka. Waxaa markii ugu horeysay la duuliyey bishii Nofeembar 1977, waxaana la dhisay laba diyaaradood. TT-3 waxaa loogu talagalay gaar ahaan duulimaadyada dhaadheer (illaa ~ 2300 mayl-badeed) waxayna awood u laheyd inay ka shaqeyso baraf aan diyaarsaneyn "runways". Waxay awoodday inay ku safarto ilaa 200 oo gunti. Hawlgalladeeda ugu weyni waxay ku duulayeen gobolka North Pole, oo ay u galayeen Antarctica, waxaana sidoo kale loo isticmaali jiray ilaalada badda iyo hawlgallada samatabbixinta.
Mashruucu wuxuu soo bandhigayaa jilitaan si heer sare ah loo qeexay oo ka kooban 3 x PT6A-45 qalabka tamarta ee TT-3. Xaalada dhabta ah ee TT-3, xogta dhabta ah iyo dukumiintiyada waa kuwo dhif iyo naadir ah, VSKYLABS-na waa inay ku dhaqaaqdaa si ay u buuxiso meelaha banaan ee ka maqan ee ku saabsan nidaamkeeda guddiga. Inkasta oo mashruuca VSKYLABS laga yaabo inuu leeyahay kala duwanaansho dhowr ah oo ka duwan kan dhabta ah ee TT-3, qaabeynta iyo habka horumarinta waxaa lagu sameynayaa taxaddar weyn iyo faham qoto dheer oo ku saabsan diyaaradda DC-3, iyo sidoo kale ixtiraam weyn oo loo hayo John M.Conroy iyo dhammaanba rag iyo dumar kale oo ku lug lahaa horumarinta iyo howlaha TT-3. Isku duubnaanta qolka iyo avionics waa casriyeysan.
Mashruucu wuxuu gaadhay heerar heer sare ah, waxaana loogu talagalay inuu dhaafo marxaladda v1.0 dhamaadka sanadkan (2021).
Ogeysiis Horumarineed oo Muhiim ah
In kasta oo ay ahayd gabi ahaanba * CUSUB * diyaarad iyo mashruuc, fikrad ahaan, mashruuca VSKYLABS TT-3 waxaa loogu talagalay inuu la wadaago naqshadaha naqshadaha la midka ah VSKYLABS C-47 FLP. Tani waxay u oggolaaneysaa in la sii wado oo la horumariyo C-47 FLP Mashruuca oo dhinac ah iyada oo la horumarinayo mashruuca VSKYLABS TT-3, halkaasoo mashruuc kasta uu ka soo baxayo wixii horumar ah ee ku habboon ee lagu sameeyo mashruuca kale. Horumarinta VSKYLABS C-47 FLP ayaa sii socota iyada oo aan wax hakad ah la gelin, mashruucuna wuu sii socon doonaa ka dib khariidadiisa horumarinta wadada. Waxaa jira dhowr waxyaalood oo cusbooneysiin waaweyn ah oo loo qorsheeyay C-47 dabayaaqada sanadkaan, iyadoo diiradda ugu weyn la saarayo muuqaalada, qaabeynta 3D iyo muuqaalka iyo xirmada codka ee FMOD.
HST Jilmooyinka ayaa soo saaray bayaan ku saabsan ku daridooda deegaan "xAmbience" ee X-Diyaarad 11 (taariikhda sii deynta toddobaadyo yar gudahood):
Warbixinta Toddobaadka # 2: xAmbience Pro - Maxaa haray ka hor sii deynta? - HST Jilmooyinka.
Kusoo dhawow Warbixinta Toddobaadka # 2. Dhammaan dhibaatooyinka ayaa ka dambeeya waana ku soo laabannay tan.
Maanta waxaan ka hadli doonaa: horumarka xAmbience Pro ee hadda, dib-u-dhiska 3D Clouds iyo munaasabadaha kale ee soo socda.
Maxaa sii daayay?
Guud ahaan, waxaan kudhowaad nahay xariiqa dhamaadka. Waxaa jira laba walxood oo haray: nidaam lagu mideeyo shay-baarka daruuraha (kani waa nidaam faragalin ku sameeya shay-baarka qulqulka qulqulka isla markaana ka dhigaya daruuraha inaysan ku soo celin) iyo khaladaadka shaqooyinka qaarkood. Waxaana jira waxyaabo badan oo yar yar oo hadda socda, laakiin waxaan filaynaa in guud ahaan la dhammaystiro toddobaadka soo socda.
Waxaan ka qabanay shaqooyin badan hagaajinta, casriyeynta dhammaan howlaha plugin. Waxaan dib u cusbooneysiinnay wax walba. Waxaa haray shaqooyin yar yar. Intaa ka dib waxaan ku bilaabi doonnaa tijaabinta EA (Kooxda Helitaanka Hore) iyo soo bandhigga dadweynaha. Intaa ka dib - waanu sii socon doonaa. Magac ahaan, daruuraha 3D. Inbadan oo tan ku saabsan cutubka soo socda.
Qorshaheena ku saabsan xAmbience Pro v1.00 Daahfurka.
Hadda waxaan qorsheyneynaa inaan ku dhammeyno toddobaad gudihiis (laga yaabee in yar oo ka badan hal toddobaad) dhammaan shaqooyinka u baahan in la dhammaystiro ka hor inta aan la gelin musharraxa sii deynta. Intaas ka dib, waxaa la sii deyn doonaa 3 fiidiyow oo ah muuqaalka muuqaalka alaabta, halkaas oo aad awood u yeelan doonto inaad ku aragto muuqaal kasta. Intaa ka dib, waxaan tijaabin doonaa mudada gaaban shaqada oo dhan waxaanna bilaabaynaa marin u helka warbaahinta (warbaahintu waxay heli doontaa nooca hore ee xA Pro oo waxaan ku tusi doonaa inaad ku nooshahay ama wax kale oo ficil ah), intaa ka dib waxaan qorsheyneynaa inaan ansixino dhismaha siideynta oo la bilaabo. Waxaan qorsheyneynaa inaan ku fulino qorshahan oo dhan toddobaadyo gudahood.
Marka, hadda qorshuhu waa: Shaqooyinkii Ugu Dambeeyay -> Tijaabinta -> Muuqaalka Muuqaalka -> Warbaahinta -> Daahfurka!
xAmbience Pro: Daruuro Dheeraad ah oo 3D ah
Shaqada daruuraha 3D dib ayaa loo bilaabay si buuxda. Waxaa jiray nasasho sababtoo ah waxaan diyaarinaynay xA Pro 1.00 siideynta, waxaana kaliya diiradda saarnay taas. Warbixin kooban: Hadda waxaan la shaqeyneynaa dad cusub oo nagu soo biiray oo naga caawin doona dejinta wax soo saarka dhuumahan. Daruuraha 3D waxay la jaan qaadi doonaan kuwa soo socda X-Diyaarad 12 iyo Vulcan. FPS ma dhici doonto. Qaybta muuqaalka ah ayaa laga beddeli doonaa aqoonsi la'aan. Waxaan ka hadli doonaa tan cusbooneysiinta soo socota ee horumarinta.
Fiidiyow yar oo fiidiyoow ah oo kaliya si loo xijiyo rabitaanka cuntada ee waxa imanaya maaddaama aan ku dhow nahay sii deynta Xirfadlaha 146.
Xirmooyinka saldhigga waxaa ku jiri doona 100/200/300 nooc oo ay weheliso noocyada QT / QC / RAF sidoo kale. The X-Diyaarad Unugga FMC ayaa soo muuqan doona isla marka la sii daayana waxaan sidoo kale ku dari doonnaa lambar FMC ah oo habaysan oo hadda ku jira horumarka.
Warbixinta Horumarka Naqshadeynta Chudoba On Vaclav Havel Airport XP
X-Diyaarad 11.53 La sii daayay
VSKYLABS Enstrom 480B Cusboonaysiinta Mashruuca
Axonos waxay kusii deysay garoonka diyaaradaha ee Jackson Hole Airport X-Plane 11
VSKYLABS waxay ku dhawaaqeysaa Enstrom E480B Helicopter Project
Cusboonaysiinta VSKYLABS ee Mashruuca XF-85 ee loogu talagalay X-Diyaarad
Axonos wuxuu ku dhawaaqay Jackson Hole Diyaaradda X-Diyaarad
X-Diyaarad v11.53RC1 News
VSKYLABS Ayaa Soo Saartay Rutan Model-158 Mashruuc X-Diyaarad
Cusbooneysiinta Verticalsim v2.0 ee loogu talagalay New Orleans XP
New France VFR Wax soo Saarka X-Diyaarad
Axonos wuxuu kusii daayay garoonka diyaaradaha Donegal Freeware loogu talagalay X-Plane 11
Duulimaadyada Xaraashka ah ee Fly X waxay ku siideysaa Zakynthos Diyaaradda 'X-Plane'
VSKYLABS Rutan Model-158 Oo Ku Dhow In La Sii Daayo X-Diyaarad
Hauler Hawada 2 Diyaarad X-Diyaaradeed ah oo la cusbooneysiiyay v3.0.0.8
Axonos wuxuu sii daayay Memphis v1.1 Diyaarad X-Plane ah
Falanqaynta ToLiss WIP A340-600 Ee Diyaaradda X-Plane
Axonos Ayaa Kasoo Saaray KMEM Diyaarad X-Diyaaradeed
X-Diyaarad Muuqaal Xaraash ah Paris Charles de Gaulle